महिलाको कुन अंगमा छुदा सेक्स गर्न आतुर हुन्छन् ? – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन १६, बिहीबार १९:३१
यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् | केही महिना अगाडि गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि सहमतीमा ल्याउने बारेमा पत्ता लागेको छ | सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौन उत्तेजना बढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप प्राक्कक्रिडा फोर प्ले गर्ने गर्नु पर्छ ।
यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर वनाउन गरिने कुनै पनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प्रेमवार्ता, सृंगार र सयुक्त ठट्टालाई पनि प्राक्कक्रिडा भनिन्छ । तर कतिपय मानिसहरु एकैचोटी सम्भोग गर्छन । यसो गर्दा पुरुष तथा महिलाको यौनप्रतिक्रिया चक्रमा भएको भिन्नताले दुवैमा चरम यौन आनन्द पाउन गाह्रो हुन्छ । यौन सुख लिने क्रममा तालमेल मिल्दैन । यथोचित प्राक्कक्रिडामा संलग्न हुदा यौन अनन्दलाई यसको चरम विन्दुमा पुर्याउन मद्दत गर्छ ।
सरकारले तोकेकै लागतमा विदेश जान के गर्ने ? यी उपाए हेर्नुहोस्
२०७६ माघ ९, बिहीबार १६:२१